Google inobhadhara $ 3.000 bhiriyoni kuApple kuti iite Google iyo yekutsvaga injini | IPhone nhau
Google inobhadhara $ 3.000 bhiriyoni kuApple kuti iite Google iyo yekutsvaga injini
Hapana chakasununguka muhupenyu huno. Uye zvishoma mubhizinesi. Google yave imwe yemakambani akakosha kwazvo pasirese chikamu cheInternet pane zvayakanakira. Google inorarama kushambadzira, mbiru yayo huru yemari, asi mumakore achangopfuura yanga ichiedza kusiyanisa kuitira kuti isazongotsamira pachikamu ichi chete, chikamu chinotonga.
Pa Android, Google inoona kuti ndiyo yekutsvaga injini yekutsvaga nekutenda kuwanda hukuru hwekushandisa zvekambani izvo zvinomanikidza mugadziri kuisa, asi mune Apple ecosystem zvinhu zvinoshanduka. Nekuda kwekuona kuti inoramba iri yekutsvaga injini muApple ecosystem, Google parizvino iri kubhadhara $ 3.000 bhiriyoni kukambani yeCompertino-based.
Nhau dzekutanga dzechibvumirano ichi chakavanzika, dzakabudiswa muna 2014, mukutongwa kwakavharwa kwemusuwo umo magwaro akataura chibvumirano ichi akaburitswa. Sezvaitarisirwa Yahoo, apo yanga isati yarova pasi, asi yaive padyo nayo, yakapinda muhondo yekuedza kuve yekutsvaga injini yekutsvaga, chimwe chinhu icho sekuziva kwedu tese chisina kushanda, nekuti sezviri pachena dhirowa yemari yeGoogle yaive hombe kupfuura Yahoo's.
Panguva iyoyo, Google yakabhadhara madhora bhiriyoni kuApple kune yekutsvaga injini, injini yekutsvaga iyo nerombo rakanaka tinogona kuchinja vashandisi kuYahoo, Bing kana Dhadha Dhadha Go. Sekureva kwekambani yeBernstein, Google parizvino inenge ichibhadhara Apple zviuru mazana matatu zvemadhora pagore, huwandu hungaratidzika kunge hwakakwira, asi kana tichifunga kuti 3.000% yemari inowanikwa neGoogle inobva kumidziyo yeApple, mari iyi inopfuura amortized uye vakomana veGomo. Maonero haakuvadze kutora cheki uye kubhadhara mari yakawanda gore rega rega kuti uenderere uchitsvaga injini yekutsvaga paIOS.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » Google inobhadhara $ 3.000 bhiriyoni kuApple kuti iite Google iyo yekutsvaga injini
Snapchat inoshanda pane nyowani basa kusanganisa mavhidhiyo evashandisi vakasiyana kubva panzvimbo imwechete